Rosia/Zeorzia: Ny Olana Amin’ny Famahanam-Bolongana Hahazoam-Bola · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Novambra 2011 4:30 GMT
Lasa zavamisy eo amin'ny serasera Rosiana ny firoborobon'ny mpamaham-bolongana karamaina sy ny “serasera an-takonana” ary nisy aza ny fandaharana sasany tao amin'ny televiziona Rosiana. Efa nanoratra momba ity lohahevitra ity tamin'ny antsipiriany ny Global Voices tamin'ny herintaona – nefa niakatra dia niakatra ny sandany hatrmin'izany fotoana izany; Afa-mijery izany any amin'ny vohikala hafa ihany koa ny tsirairay (ohatra ato sy ato).
Tamin'ny 17 Oktobra 2011 i Yakunin no nanoratra [ru] tao amin'ny bolongany:
Namoaka ny pikan'efijerin’ [ru] ny karajia i Yakunin hanamarinany ny lazainy.
“Manorata lahatsoratra,” hoy [ru] ny mpamaham-bolongana temur25 namany sady mpamaky azy.
“Rehefa tsy hanoratra ianao, misy hanoratra foana eo.” “Tsy mila vola angaha ianao?” hoy i tipo-graff nanontany [ru].
“Manorata. Samy mahazo. Na ianao na ilay mpitantana. Ary i Saakashvilli, kosa, araka ny eritreritro tsy haninona amin'izany,” hoy [ru] i Run-if-you-can.
Mampisy tolo-bola “mahaliana” ny Laza sy ny isan'ny mpamaky matetika (jereo indray ny lahatsoratra Global Voices voalaza etsy ambony na ny resaka nosoratan'i russos ato [ru]). Tsy dia mahagaga ny rehetra loatra intsony ny fifampiangan'olona roa ho voakarama tamina famoahana lahatsoratra eo amin'ny mpamaham-bolongana Rosiana. Fa mifanontany indray ny tsirairay hoe firy ny isan'ny olona tena mandray vola tsy milaza na inona na inona, na mandika tena ho tsy azo anaovana kolikoly. Manana anjara toerana lehibe ny olana ara-bola sy ny ezaka goavana natao hahazoana mpamaky ny bolongana an'arivony.